महेशले त्यसपछि फुलाए गोदावारी – Fewa Times
प्रकाशित मिति: September 3, 2017 6:40 pm
कथाकार तथा समालोचक महेश पौड्यालको कथा संग्रह ‘त्यसपछि फुलेन गोदावरी’को शुक्रवार विमोचन गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त कथा संग्रहको विमोचन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभागका प्रमुख अम्मरराज जोशी, प्राज्ञ मातृका पोखरेल, प्रा.डा. अभि सुवेदी, साहित्यकार डा. नवराज लम्साल र समालोचक कुमारी लामाले द्वारा गरिएको हो ।
पौड्यालको साहित्यिक ऊर्जा तारिफ योग्य भएको संग्रहको समीक्षा गर्दै प्रा.डा. अभि सुवेदीले बताए । त्यस्तै, प्राज्ञ मातृका पोखरेलले कथामार्फत पौड्यालले नयाँ ट्रेन्डको सुरुवात गरेका बताए । उक्त समारोहमा डा. नवराज लम्साल द्वारा स्वर बद्ध कथा पनि सुनाईेको थियो ।
गतवर्ष पुत्र गुमाएका पौड्यालले उक्त पीडालाई सङ्ग्रहको सुरुमै ‘नर्सरी’ शीर्षकमार्फत उजागर गरेका छन् ।